Print Page - Su'aal: Birta dhiiga oo badan? Wareega dhiiga oo yar? Qufac markii aan ordo?
Diseases and Conditions => Qaybta Su'aalaha => Topic started by: Durdur on May 15, 2011, 02:20:22 PM
Title: Su'aal: Birta dhiiga oo badan? Wareega dhiiga oo yar? Qufac markii aan ordo?
Post by: Durdur on May 15, 2011, 02:20:22 PM
Title: Re: Su'aal: Birta dhiiga oo badan? Wareega dhiiga oo yar? Qufac markii aan ordo?
Post by: SomaliDoc on May 19, 2011, 08:49:53 PM